အာမခံလုပ်ငန်းတွေမှာ Customer Data က ဘာလို့ အရေးကြီးတာလဲ? – it4a
Customer တွေနဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိဖို့၊ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့ဆိုရင် Customer Data တွေကို အချိန်ကြာမြင့်စွာထိန်းသိမ်းပြီး လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ လိုအပ်တဲ့ Data ကိုရရှိနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် အာမခံလုပ်ငန်းမျိုးတွေမှာဆိုရင် Customer တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ Data တွေကို နှစ်ရှည်လများစွာ ထိန်းသိမ်းရပါတယ်။ များပြားလှတဲ့ Customer တွေရဲ့ အာမခံအမျိုးအစားတွေဟာ တူညီမှာမဟုတ်သလို Data တွေကိုမှားယွင်းသွင်းမိလို့လဲမရပါဘူး။
ဒီပြသနာတွေအတွက် SAP C/4 Hana Software ကအဖြေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Cloud ပေါ်မှာသိမ်းဆည်းထားပေးတဲ့အတွက် အချိန်မရွေ၊း နေရာမရွေ၊း Device မရွေးအသုံးပြုပြီး Customer Data တွေကိုပြန်လည်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် အာမခံထားတဲ့ Customer တစ်ယောက် Accident ဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့။ Insurance Company ရဲ့ Inspector လို့ခေါ်တဲ့ အမှုအခင်းစစ်ဆေးတဲ့လူက အခင်းဖြစ်ရာနေရာကိုသွားရောက်ပြီး အခြေအနေကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရပါတယ်။ သူရဲ့ ဖုန်း ဒါမဟုတ် Tablet ကနေပြီး Cloud မှာသိမ်းဆည်းထားတဲ့ Customer ရဲ့ Data တနည်းအားဖြင့် ဘယ်အချိန်က အာမခံဝယ်ယူခဲ့တယ်ကို ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရှိတယ်ဆိုတာကိုပါ တခါတည်းစာရင်းသွင်းနိုင်ပါတယ်။ Inspector ထည့်သွင်းလိုက်တဲ့ အချက်အလက်များကို တချိန်တည်းမှာပဲ ဋ္ဌာနချုပ်က သိရှိနိုင်တဲ့အတွက် လိုအပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များကို အချိန်မှီ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် Customer တွေရဲ့ Data တွေကို ချို့ယွင်းချက်မရှိ ပြီးပြည့်စုံစွာထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို ပိုမိုမြန်ဆန်စေတဲ့အတွက် SAP C/4 Hana Software ကိုသာရွေးချယ်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။
လူကြီးမင်းတို့လုပ်ငန်းတွေအတွက် SAP C/4 Hana Software နဲ့ပတ်သတ်ပြီး စုံစမ်းမေးမြန်းချင်ပါက ကျွန်တော်တို့ it4a ကအသင့်ရှိနေပါတယ်။
Address – Room 602, Building 14, MICT Park, Yangon တို့ကို ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်တဲ့အပြင် it4a ရဲ့ Official Website ဖြစ်တဲ့ https://it4a.io/ မှာလည်းဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
« E-Commerce လုပ်ငန်းများအတွက် SAP C/4HANA Customer တွေနဲ့ ဆက်ဆံရေးမှာ Data တွေက ဘာလို့ အရေးကြီးတာလဲ? »